COVID in Myanmar (part one)
An interview with Dr Kyi Minn, Senior Health Specialist Myanmar Health and Development Consortium (Part one of three) Myanmar language below
Forum: Can you give us an overview of the current situation in relation to COVID-19 in Myanmar?
The first case of COVID-19 was confirmed on the 23rd March, 2020. Up to the first week of July, 2020, Myanmar government has officially announced that there isatotal of 316 confirmed case of COVID-19 out of 86.821 tested by 8 July 2020. Out of the confirmed cases, 250 cases (79.1% of confirmed cases) recovered and only6fatalities (1.89% of confirmed cases).
These figures are low compared to global situation and in the Asia Pacific region. The testing rate compared to the population (53.7 million, 2018) is around 0.16% of the total population or 1,616 per million population (July, 2020). This is also low and the lowest in the ASEAN member states. Because of the limited financial resources, not all the suspected cases and /or person under investigation (PUI) were tested. All the suspected cases and returnees from foreign countries were quarantined either at government arranged quarantine facilities or community quarantine centers for 21 days. According to the information from the Ministry of Health and Sports, there are 156 imported cases and 160 locally transmitted cases up to the first week of July, 2020. The highest peak of COVID cases were found during the month of April and second peak was in the first week of May, 2020. Majority of cases were locally transmitted up to the end of April 2020. Beginning from the second week of May, almost all the confirmed cases were imported cases mostly returning Myanmar citizens from overseas.
Forum: And what has been the Myanmar government’s response so far?
Ministry of Health and Sports (MOHS) was informed by the WHO South East Asia Regional Office (SEARO) on the 4th January 2020 on the unexplained outbreaks of severe pneumonia infection in China, started in Wuhan. As Myanmar is the nearest neighbors of China. MOHS started emergency preparedness after obtaining the information from WHO. On the January 30, 2020,aNational level Central Committee for COVID 19 Prevention, Control and Treatment was formed. The preparation for COVID-19 response includes strengthen the treatment capacity for COVID-19 and boosting up the preventative measures especially across the border points and more vigilance on people coming in with fever. After WHO declared COVID-19 as pandemic on March 11, 2020, the government started the mandatory quarantine and monitoring of people arriving from high risk countries and imposed banning of public gathering of more than5people. After the confirmation of first case of COVID-19 in Myanmar, the Ministry of Health and Sports speedup the prevention measures such as public awareness, taking temperature screening at the border points and airport; community monitoring system (requesting communities to report any sick people or people returning from overseas in their neighborhood) and increasing capacity to test. All the international commercial flights were cancelled on the 28th March, 2020.
There were panic buying at the supermarkets for essential household items after the first confirmed case of COVID was announced and the prices of surgical masks soaring high to 10 times of the ordinary price.
International community including Australian government provided support to strengthen both the prevention and treatment capacity of COVID 19 through providing much needed PPE and essential medical equipment for COVID 19 patient management. Three hospitals in Yangon division were designated as COVID-19 hospitals and all the state and divisional hospitals were equipped with Intensive Care Unit (ICU) and isolation wards to treat COVID-19 patients.
It was widely accepted that the current health response to COVID was successful and able to overcome the first wave in Myanmar. There has been no local transmission in Myanmar for3weeks, at the time of writing this article. But the Ministry of Health and Sports also cautioned repeatedly in the media that the second wave can start anytime with more widespread transmission if people become complacent.
မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိ ကိုဗစ်အခြေအနေနှင့် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများ (အပိုင်း ၁)
ဖိုရမ်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်−၁၉ လက်ရှိအခြေအနေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ အကျဥ်းချုံးအချက်အလက် ပြောပြနိုင်မလားခင်ဗျာ?
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်−၁၉ ပထမဦးဆုံးလူနာကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့အထိ ကိုဗစ်−၁၉ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှု မှတ်တမ်းများအရ ဇူလိုင်လ ပထမပတ်အထိ ကိုဗစ်အတည်ပြု လူနာ စုစုပေါင်း ၃၁၆ ဦးအထိ ဆက်တိုက်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း မြန်မာအစိုးရမှ တရား၀င်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းအတည်ပြုလူနာများအနက် ၂၅၀ ဦးမှာ (၇၉.၁% ရောဂါ အတည်ပြု ဖြစ်ပွားမှုနှုံး) ရောဂါပိုးကင်းစင် ပြန်လည်သက်သာ ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီး ၆ ဦးမှာတော့ (၁.၈၉% သေဆုံးမှုနှုံး) ယင်းရောဂါကြောင့် ပိုးတွေ့သေဆုံးလူနာ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
အထက်ပါနှုံးများကတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစု နှင့် အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ နှင့် နှိုင်းယှဥ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုံး နည်းပါးပါတယ်။ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ စုစုပေါင်း နှုံးမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေ (၅၃.၇ သန်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်) နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ ၀.၁၆% ပါတ်၀န်းကျင် သို့ လူဦးရေ တစ်သန်းတွင် ဖြစ်ပွားမှုနှုံး ၁.၆၁၆ သာရှိပါသည် (ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၀)။ အဆိုပါြဖစ်ပွားမှုနှုံးများမှာ နည်းပါးပြီးတော့ အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံများအတွင်း ကြည့်မယ်ဆိုလျင်လည်း အနိမ့်ဆုံးအခြေအနေ မှာရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး ငွေရေးကြေးရေးအားဖြင့်လည်း အခက်အခဲတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ကိုဗစ်ရောပါ သံသယဖြစ်သူတွေ အားလုံးကိုတော့ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ဖို့ သို့ စောင့်ကြည့်လူနာအနေနဲ့ မပြုလုပ်နိုင်ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ သံသယဖြစ်တဲ့သူအများစုဟာ နိုင်ငံခြားပြည်တော်ပြန်များကနေတဆင့် တွေ့ရှိရပြီး သူတို့ဟာ အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ quarantine စင်တာ သို့ သက်ဆိုင်ရာနေရာဒေသတွေမှာရှိတဲ့ quarantine နေရာတွေမှာ ၂၁ ရက် ထားရှိနေထိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာန က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းအရတော့ ဇူလိုင်လပထမပတ်အထိ ပြည်တော်ပြန်များကနေတွေ့ရှိမှုမှာ ဓါတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ ၁၅၆ ဦးရှိပြီး ပြည်တွင်းမှာတွေ့ရှိတဲ့ ဓါတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ ၁၆၀ ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကူးစက်အဖြစ်အများဆုံး ကိုဗစ် လူနာတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေကတော့ ဧပြီလ နဲ့ ဒုတိယအတွေ့အများဆုံးကတော့ မေလပထမပါတ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကူးစက်လူနာတွေကတော့ ဧပြီလကုန်တဲ့အထိ ပြည်တွင်းကနေဆင့် ပဲ ဖြစ်ပွားတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မေလဒုတိယပါတ်မှာတော့ ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားလူနာ အားလုံးနီးနီးဟာ ပြည်တော်ပြန်များကနေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဖိုရမ်။ အခုလက်ရှိအထိ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရရဲ့ ကိုဗစ်−၁၉ အပေါ် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများ ဘာတွေရှိပါသလဲ?
ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက်နေ့မှာတော့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ကနေ တရုတ်နိုင်ငံ ၀ူဟန်မြို့ကနေစတင်ခဲ့တဲ့ အမည်မသိတဲ့ အဆုတ်ရောင်ရောဂါပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပွားပျံ့နှံ့နေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာန ကို အကြောင်းကြားလာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကလည်း အိမ်နီးနားခြင်းနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာနမှလည်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ကနေ သတင်းအချက်လက်ရရှိပြီးကတည်းက ကိုဗစ်အတွက် အရေးပေါ် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှု များကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်အဆင့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီ ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကိုဗစ်−၁၉ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် ရောဂါကာကွယ်ရန်လိုအပ်သော နည်းပညာ၊ ပစ္စည်းကရိယာများ နှင့် တိုက်ဖျက်ဆောင်ရွက်မှုများကိုမိုကောင်းမွန်စေရန် နှင့် နယ်စပ်ဒေသများ၌ တစ်ဖက်နိုင်ငံ၊ ဒေသများမှ ပြန်လာသောသူများ အထူးသဖြင့် အဖျားရှိသောသူများအား သေသေချာချာစောင့်ကြည့်နိုင်စေရန် စသည်တို့ပါ၀င်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အဆိုပါကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားပျံ့နှံ့မှုများအား မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအဖြစ် ကြေငြာပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း မဖြစ်မနေ quarantine လုပ်ရန် နှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများသောနိုင်ငံများမှ ပြန်လာသူများ နှင့် ၎င်းတို့အား စောင့်ကြည့်သုံးသပ်မှု ပြုလုပ်ရန် နှင့် ပြည်တွင်းတွင်လည်းလူ ၅ ဦးထက်ပိုမစုရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးသော ကိုဗစ်ဖြစ်ပွား ပိုးတွေ့အတည်ပြုလူနာ တွေ့ရှိကတည်းက ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာနမှလည်း ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ လေယာဥ်ကွင်း နှင့် နယ်စပ်များတွင် ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်သူလူထုအချင်းချင်း စောင့်ကြည့်သုံးသပ်မှုလုပ်ငန်းများ (၎င်းတို့ပါတ်၀န်းကျင်တွင် ပြည်ပမှပြန်လာသူများ သို့ နေမကောင်း၍ သံသယလူနာများရှိပါက ပြည်သူလူထုအား အကူအညီတောင်း၍ စောင့်ကြည့်နိုင်စေခြင်း) နှင့် ရောဂါပိုးဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်နမူနာများ ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် စသည်တို့ကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတကာလေကြောင်းသွားလာမှုအားလုံးကိုလည်း ကန့်သတ်ခဲ့ပါသည်။
ပထမ ကိုဗစ်လူနာအတည်ပြုကြေငြာပြီးနောက် စျေးဆိုင်များတွင် အခြေခံစားကုန်များအပေါ် နှင့် နှာခေါင်းစည်းများမှာလည်း ပုံမှန်စျေးထက် ၁၀ ဆ စျေးမြှင့်တက်ခဲ့ပြီး အလုအယှက်၀ယ်ယူမှုများ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာမှလည်း ကိုဗစ်−၁၉ လူနာများကို ကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲ ကာကွယ်နိုင်ရန် နှင့် ကုသနိုင်ရန်အတွက် တစ်ကိုယ်ရေရောဂါကာကွယ်ရေး၀တ်စုံ (PPE) နှင့် အဓိကလိုအပ်သော ဆေး၀ါးပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းတွင်ရှိသော ဆေးရုံ ၃ ရုံကိုလည်း ကိုဗစ်ဆေးရုံအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး အခြားပြည်နယ် နှင့် တိုင်းများတွင်ရှိသော ဆေးရုံများကိုလည်း အထူးကြတ်မတ်ကုသဆောင်များ (ICU) နှင့် ကိုဗစ်လူနာများအား ပြုစုရန်အတွက် သီးသန့်အဆောင်များအဖြစ်လည်း ထားရှိဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိ ကိုဗစ်ပထမလှိုင်းကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆောင်ရွက်တုန့်ပြန်မှုများမှာ အောင်မြင်တယ်လို့တော့ အများကတော့ လက်ခံကြပါတယ်။ ဒီကိုဗစ်အကြောင်း ရေးသားနေစဥ် သုံးပတ်အတွင်းမှာ တော့ ပြည်တွင်းမှာ ကိုဗစ်ရောဂါ ကို အချင်းချင်းကနေ ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတော့ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ သို့သော်ငြားလည်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာန မှ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်း အချိန်မရွေး ရိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီး အလွယ်တကူ ပိုမိုကူးစက်ပျံ့ပွားနိုင်တဲ့အတွက် ပြည်သူတွေအနေဖြင့် မပေါ့ဆဖို့ ကိုလည်း သတင်းမီဒီယာကနေတဆင့် အမြဲတန်း သတိပေးအကြောင်းကြားလျက် ရှိပါတယ်။
နောက်အပတ်တွင် အပိုင်း ၂ ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။